BlockNet စျေး - အွန်လိုင်း BLOCK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BlockNet (BLOCK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BlockNet (BLOCK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BlockNet ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $11 628 901.00
volume_24h_usd: $309 216.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BlockNet တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BlockNet များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BlockNetBLOCK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.29BlockNetBLOCK သို့ ယူရိုEUR€1.09BlockNetBLOCK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.983BlockNetBLOCK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.18BlockNetBLOCK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr11.61BlockNetBLOCK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.8.11BlockNetBLOCK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč28.65BlockNetBLOCK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.81BlockNetBLOCK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.72BlockNetBLOCK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.79BlockNetBLOCK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$28.96BlockNetBLOCK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$10.02BlockNetBLOCK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$6.92BlockNetBLOCK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹96.94BlockNetBLOCK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.218.1BlockNetBLOCK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.77BlockNetBLOCK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.94BlockNetBLOCK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿40.24BlockNetBLOCK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥8.99BlockNetBLOCK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥136.39BlockNetBLOCK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1532.23BlockNetBLOCK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦492.05BlockNetBLOCK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽94.9BlockNetBLOCK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴35.84
BlockNetBLOCK သို့ BitcoinBTC0.000109 BlockNetBLOCK သို့ EthereumETH0.00326 BlockNetBLOCK သို့ LitecoinLTC0.0215 BlockNetBLOCK သို့ DigitalCashDASH0.0127 BlockNetBLOCK သို့ MoneroXMR0.0138 BlockNetBLOCK သို့ NxtNXT91.67 BlockNetBLOCK သို့ Ethereum ClassicETC0.18 BlockNetBLOCK သို့ DogecoinDOGE366.34 BlockNetBLOCK သို့ ZCashZEC0.013 BlockNetBLOCK သို့ BitsharesBTS49.37 BlockNetBLOCK သို့ DigiByteDGB47.51 BlockNetBLOCK သို့ RippleXRP4.2 BlockNetBLOCK သို့ BitcoinDarkBTCD0.0434 BlockNetBLOCK သို့ PeerCoinPPC4.44 BlockNetBLOCK သို့ CraigsCoinCRAIG574.21 BlockNetBLOCK သို့ BitstakeXBS53.74 BlockNetBLOCK သို့ PayCoinXPY22 BlockNetBLOCK သို့ ProsperCoinPRC158.11 BlockNetBLOCK သို့ YbCoinYBC0.000677 BlockNetBLOCK သို့ DarkKushDANK404.07 BlockNetBLOCK သို့ GiveCoinGIVE2727.62 BlockNetBLOCK သို့ KoboCoinKOBO282.81 BlockNetBLOCK သို့ DarkTokenDT1.19 BlockNetBLOCK သို့ CETUS CoinCETI3636.7